ज्योति विकास बैंक र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) बीच सहकार्य
२०७७ चैत्र ९ गते सोमवार
९ चैत, काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) बीच सहकार्य भएको छ । इक्यानमा आबद्ध व्यवसायी र इक्यान सदस्यहरुलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा र विशेष छुटमा प्रोफेसनल लोन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हो । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ नेपालको सबैभन्दा ठुलो गुणस्तरिय वैदेशिक शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरुको छाता संगठन हो ।
आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री श्रीचन्द्र भट्ट र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका तर्फबाट इक्यानका अध्यक्ष श्री प्रकाश पाण्डेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सम्झौता अनुसार बैंकले इक्यानमा आबद्ध व्यवसायी र इक्यान सदस्यहरुलाई विशेष छुटमा प्रोफेसनल लोन र १५ लाख रुपैयाँ सम्मको बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यस सम्झौता पश्चात नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान)मा आबद्ध व्यवसायी र इक्यान सदस्यहरुलाई ज्योति विकास बैंकको कर्जा सेवाले थप सहजता प्रदान गर्नेछ ।
ज्योति विकास बैंकले हाल १०५ शाखा कार्यालय, १ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६१ वटा ATM मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । हालसम्म बैंकले ३ लाख भन्दा बढि खाताबाट करिब रु. ४६ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २३ हजारभन्दा बढि ऋणीलाई करिब रु. ३९ अर्ब लगानी गर्न सफल भएको छ ।
एकदिनमा कति नुन खानुहुन्छ ? हृदयघात होला
नेपाल बंगलादेश बैंकले ८.४२ प्रतिशत लाभांश दिने
अमेरिकाले कोभिड-१९ खोपका लागि सेना परिचालन गर्ने
रुपन्देहीमा टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णय
वाग्मतीमा आर्थिक कारोबार र प्रशासन सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत
सावित्राको चार गोलको मद्दतमा एपिएफ विजयी
चीनमा १० करोड व्यक्तिलाई कोरोना विरूद्धको खोप दिइयो
भेरी अस्पतालका दुई जना चिकित्सकमा कोरोना पुष्टि
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहित मुख्यमन्त्रीहरुले दोस्रो चरणमा काेराेनाविरुद्धकाे खोप लगाउने
मेगाको क्यूआर भुक्तानी सेवा जोरपाटीको तरकारी बजारमा